के माधब नेपाल पक्षको कारवाही फिर्ता होला ? | Taja Update
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलद्धारा नेकपा स्थापना दिबसमा शुभकामना
दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, शेयर कारोवार ४ अर्बमा खुम्चियो
के माधब नेपाल पक्षको कारवाही फिर्ता होला ?
बैशाख २३, काठमाडौं । नेकपा एमाले संस्थापन पक्षले माधब नेपाल पक्षका धेरै नेतालाई कारवाही गरेको छ । निलम्बनदेखि निश्कासनमा परेका नेपाल पक्षका नेताहरुलाई संस्थापन पक्षले कारवाही फिर्ता गर्ला वा नगर्ला अहिले चासोको बिषय बनेको छ ।
यस बिषयमा छलफल गर्न आज बिहिबार नेकपा एमालेको बैठक बस्यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जनालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको स्रोतले जनायो ।
अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाएका थिए । आकस्मिक बैठकमा सहभागीहरुले भने तत्काल कारबाही गर्नु उचित नहुने, बरु सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि कारबाही फिर्ताबारे बिहीबारको बैठकले निर्णय भने गरेन । तर स्पष्टीकरण सोधिएका चार नेतासहित ३० सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने निष्कर्ष पनि बालुवाटार बैठकले निकालेको छ । यस्तो निष्कर्ष निकालिसकेको बैठकले के अझै नेपाल पक्षको कारवाही फिर्ता होला ?
बैशाख २४, काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत अन्य समूहतर्फको रिक्त एक सिटको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज शुक्रबार नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । उप निर्वाचनका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउन स्थायी कमिटीका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलका लागि अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार बोलाएको नेता सुवास […]